Black Magic: Secure Gallery v3.1.4 (Pic & Video Lock For Android) [1.42 MB]
Secure Gallery v3.1.4 (Pic & Video Lock For Android) [1.42 MB]
Posted by Black Magic | Posted in Android Applications , Lockers | Posted on 8:45 PM
ကိုယ့်ဖုန်းထဲက ဓါတ်ပုံတွေ Video တွေကို တခြားလူတွေကြည့်လို့မရအောင် Lock ချပေးမယ့် Application လေးပါ..၊ Pattern Lock ဖြစ်ဖြစ် .. Password နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ... ၊ကိုယ်ကြိုက်သလို ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်..၊ Video နဲ့ Photo တွေအတွက် သီးသန့် Lock ပါ..၊ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလို့ရပါပြီ..၊
Google Play ကနေဒေါင်းချင်တဲ့သူတွေကတော့ ဒီကနေ သွားဒေါင်းလိုက်ပါ..၊ Play Store ဝင်လို့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကတော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ထဲက အဆင်ပြေမယ့် Link ကနေဒေါင်းလိုက်ပါ..၊
အသေးစိတ်အချက်အလက်နဲ့ Screen Shots ကိုတော့ အောက်မှာထည့်ပေးထားပါတယ်..၊
Download From My Cloud(Just One Click) | Download From Miloshare
--- if you hide Secure Gallery's Icon in options, and then Secure Gallery will disappear. To run it, please put 'Widget' of Secure Gallery in Widget List and click it.
--- Settings of phone 〉Applications 〉Stock Gallery 〉'Clear Data' and 'Cache Delete' 〉Rebooting phone
--- enable 'Running Lock' option in Settings, then Secure Gallery will requestapassword when running it.